Liverpool oo war farxad leh helaysa ka hor kulanka habeen dambe ee Final-ka Europa League – Gool FM
Liibaan Fantastic May 17, 2016
(Liverpool) 17 Maajo 2016 Tababare Jurgen Klopp ayaa helaya war lagu farxo kadib markii uu si buuxda tababarka uga qayb qaatay kabtanka kooxda ee Jordan Henderson.
25 jirka xulka ingiriiska ee Jordan Henderson ayaa shaaciyay inuu taam u yahay kulanka Final-ka Europa League oo habeen dambe ay laciyaari doonaan kooxda Sevilla.
Laacib kaan ayaa ku dhaawacmay kulankii kooxdiisu ay wareega 8-da Europa League kula ciyaartay Borussia Dortmund wuxuuna dib garoomada ugu soo laabtay kulankii axada ee West Brom markaas oo uu badal ku soo galay.
“Waxaan dareemayaa inaan fiicanahay, waxaan ciyaaray dhamaadkii isbuuca, waxaan diyaar u ahay inaan ciyaaro waqti badan ama mid yar hadba sida uu u arko tababaraha” ayuu yiri Jordan Henderson ka hor kulanka habeen dambe.
“Ma filayo inaan ku soo bilaaban doono, waqti dheer ayaa maqnaa, kooxdu sifiican ayeey u ciyaareen la’aanteey, laakiin diyaar ayaan ahay”.
Jordan Henderson ayaa ku tilmaamay Final-ka habeen dambe mid laacib walba uu ku taamo inuu ka qayb qaato wuxuuna rajeeyay inay u rumowdo riyadiisa oo uu ciyaaro kulankaas.
Conor McGregor oo dab ku sii shiday xanta sheegeysa inay fooda is dari karaan Floyd Mayweather....(Kulan la wada sugayo)+SAWIRRO
"Haddii kubadda cagtu ay leedahay cadaalad Atletico ayaa ku guulaysan doonta Champions League" - Gianluigi Buffon